UKUTSHATA EKUBONENI KOKUQALA KWENEIL BOWLUS TEASES 'SHIFT' KUNYE NOSAM - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato Utshatile ekuboneni kokuQala kukaNeil Bowlus ukhathaza iShift elungileyo emtshatweni noSam
Utshatile ekuboneni kokuQala kukaNeil Bowlus ukhathaza iShift elungileyo emtshatweni noSam
Kudliwanondlebe olukhethekileyo kunye neNqaku, uNeil Bowlus uthi akanakulinda ababukeli ukuba babone utshintsho kubudlelwane bakhe noSam Role. Ityala: Zach Dilgard / FYI
Ngu: Kelly Spears 02/02/2016 ngo-8: 38 AM
Zonke iiholide zokubandakanya umtshato eMexico
Ngelixa ixesha le-3 le- Ukutshata ekuboneni kokuqala ithathe ababukeli kuhambo olungqingqwa, ingcali yokuthobela eneminyaka engama-31 uNeil Bowlus ungqine ukuba ungomnye wabafo abalungileyo.
Emva kokudityaniswa nomphathi webhanki oneminyaka engama-30 ubudala uSamantha Role, esi sibini sitshatile kwaye satshata kunye ngaphambi kokuzama ukudibanisa ubomi babo. Ubudlelwane babo obunobundlongondlongo bugcine ababukeli bezibuza ukuba uBowlus noRole baya kuze babone ngaphaya kokungafani kwabo. Iminwe iyawela ukuba utshintsho olukhawulezileyo luya kwenzeka ngaphambi kweveki ezintandathu Ukutshata ekuboneni kokuqala Inkqubo iphela, kwaye isibini sinyanzeliswa ukuba sithathe isigqibo: qhubeka nomtshato okanye ifayile yoqhawulo mtshato.
Ukulandela udliwanondlebe lomfazi wakhe Ingcaciso , UB Bowlus uphendule imibuzo embalwa ebesifuna ukuyibuza. Nangona abo batshatayo bethethe nathi kwangoko kwi Ukutshata ekuboneni kokuqala Inkqubo, kuninzi okwenzekileyo ukusukela oko kudliwanondlebe lokuqala oluchukumisayo.
Indima wayengenantloni yokuvuma ukuba ebengaphantsi kokuhlonipha indoda yakhe. Ndiyavuma ukuba ayekhona amaxesha 'obandayo' kunye 'nobubi,' u-Bowlus uyavuma ukuphendula ukwamkelwa ngumkakhe. Njengokuba kwakunzima kula maxesha kum, bekunzima ngokulinganayo, okanye nangaphezulu, kuSam. Eyona nto ibaluleke kakhulu kwingxelo yakhe kukuba 'ebekhona,' ebonisa ukuba akasazibonakalisi ezo mpawu, endinokuziqinisekisa kwaye ababukeli baya kubona ngokunjalo.
Saziva sinyanzelekile ukuba sibuze uB Bowlus ukuba ngaba Ukutshata ekuboneni kokuqala Abasebenzi benyusa umdlalo weqonga kwaye badlale umdlalo 'oqhelekileyo' phakathi kwabasandul 'ukutshata. Andikholelwa ukuba umboniso ubonakalise iminyhadala kunye nokudlala okuqhelekileyo ngendlela engeyiyo, uxelela iKnot. Kukho amaxesha amnandi kunye nonxibelelwano oluqhelekileyo ekungekho mntu uya kuze alubone. Ngokoluvo lwam, ukumelwa kuchanekile ngendlela endidibene ngayo noSam. Ngokuqinisekileyo kuya kubakho utshintsho, kwaye andinakulinda ababukeli ukuba bayibone!
Njengoko silindele ukuba utshintsho kubudlelwane bukaRole noBowlus, kuye kwafuneka sibize umntu osandul 'ukutshata kwisabelo sakhe somsebenzi wasekhaya. Emva komzamo wokungaphumeleli kwesi sibini sokubambana ngezandla kwaye sijongane emehlweni, njengoko kuceliwe ngu Ukutshata ekuqalekeni Iingcali, besinomdla wokuba esi sibini siyinike enye ikhamera. Ngelishwa, uSam ufumene ukuba une-ELAS (eye Locking Ephephe Syndrome), ebonakaliswa kukungakwazi ukujonga umntu emehlweni ixesha elide kwaye ugcine ubuso obuqondile, uB Bowlus uyahleka.
Ndiyadlala! Andinguye ugqirha kwaye ndiyenzile loo nto, uyahlekisa, kodwa sixoxe ngayo, kwaye ndiyabuqonda ubuzaza obudibene nayo. Asikaze siphinde senze i-asayinimenti, kodwa andiqinisekanga ukuba isabelo besingasinceda ukuba siqhagamshele ngenxa yokubandezeleka obekuxoxiwe ngaphambili.
U-Funnyman Bowlus unecala elinobuzaza, elibonakalayo xa ebuzwa malunga nokuphendula ngokukhawuleza komfazi kuye. Andizukutsho ukuba kunzima, kwaye ikakhulu kungenxa yengqondo endiyizisileyo kulo mtshato, wabelana ngokuvulekileyo, ekufuneka evulekile kwaye angalindeli nantoni na. Ukuphendula kukaSam kuyatshintsha, kwaye oko kuyahambelana noko ndikholelwayo; Umtsalane unokutshintsha ngokuhamba kwexesha. Utshintsho olukhawulezayo kuSam lukhulu, kwaye luvelisa iimvakalelo ezintsha kunye neemvakalelo zomtshato wethu.
Bowlus uthathe kwi-Twitter kulandela udliwanondlebe lukaRole lwamva nje kunye neLizapourunemerenbleus, encoma ukuzazi komfazi wakhe kunye nokukhula. Akukho nanye into ethethwe nguSam endenza ndizingce ngokukhula kwakhe, abantu abasandul 'ukutshata bayavuma. Lulonke utshintsho alwenzileyo kuye olundenza ndizive ndinjalo. Uyibonisa ngokucela uxolo ngezenzo zakhe, ngokuziphatha kwakhe, kunye nokuziphatha ngentlonipho.
Ndiyavuma ukubalisa kwakhe 'umlo' esasinawo malunga nokungena / ukuphuma endaweni yakhe, wabelana malunga nengxabano kwisiqendu sikaJanuwari 19. Yintoni enomdla ngaloo mfazwe ayisiyiyo imeko okanye impendulo ekhawulezileyo, kodwa ngakumbi indlela sobabini sikwazi ukubona iimpazamo zethu kwaye sihlangana ukuya phambili.
Utshatile ekubonweni kokuqala kukaNeil Bowlus uxelele uKnot ukuba kuya kubakho utshintsho kubudlelwane bakhe noSam Role kwiziqendu ezizayo. Ityala: Zach Dilgard / FYI
Ukutshata ekuboneni kokuqala abalandeli bebenomdla wokuba uB Bowlus ubuze ukuba kutheni edibene nendima. Ndibuze umbuzo wethu kwangoko kwiholide yasemva komtshato, uxelele iKnot. Mna noSam sasinzima ukufumana izinto ezifanayo, kwaye saba nencoko malunga neendima zesini ezibonisa ukuba asikho kwiphepha elinye. Emva ‘phantse kwengozi’ ekupheleni komtshato, kwacaca ukuba kutheni simatanisiwe.
Kodwa u-Bowlus ucinga ukuba Ukutshata ekuboneni kokuqala iingcali zinokulindela ukungqubana xa zimthelekisa nendima? Ngokubhekisele phambili kwidrama, akunjalo, uB Bowlus usixelela. Andikholelwa ukuba ikhona indlela yokuqikelela ukuba abantu bazakuphendula njani kwimeko ethile. Ungabuza yonke imibuzo oyifunayo, kodwa abantu abanakulindeleka. Into endicinga ukuba iingcali ziyibonile yindlela esinokuncedisana ngayo, ukuba singancedana kangakanani ukukhula, kwaye sizinikele sobabini.
Kubekho impikiswano kwimidiya yoluntu ngokubhekisele kunyango lukaRole kumyeni wakhe. Ngethamsanqa, u-Bowlus ugcina isimo sengqondo esifanelekileyo kunye nezo zimvo zingalunganga ngokwembono. Mna ngokwam andiyiniki ingqalelo kakhulu imidiya yoluntu, uyavuma. Ubukhulu becala ndicinga ukuba ababukeli bawubonile umtshato wethu uboniswa ngokuchanekileyo kwaye uninzi lwababukeli luthetha ngentlonipho.
Inxalenye encinci evakalelwa kukuba kufuneka yenze uhlaselo lomntu ikhululekile ukwenza njalo ngasemva kwescreen sekhompyuter, u-Bowlus uyaqhubeka, kwaye ndiyathandabuza ukuba bazakuthetha izinto ezinjalo ebusweni bomntu. Uzivumile iimpazamo zakhe (ababukeli abanokuthi bangazazi okwangoku) kwaye oko kuthetha lukhulu kubuntu bakhe. Abantu banokuba krwada; yindlela osabela ngayo kubo ebenza babe nentsingiselo.
Kwangoko Ukutshata ekuboneni kokuqala Inkqubo, esi sibini sinengxaki yokubona ngamehlo ukuba iikhamera zizichaphazele njani izenzo zazo. U-Bowlus ukusukela oko eza kunye nabo ngokufota ngobomi bakhe bemihla ngemihla. Ndandiqhele iikhamera ngokuhamba kwexesha, wabelana, baba ngaphantsi kwamanye amazwe kwaye kulula ukuphatha.
Usuku lweendleko zomququzeleli womtshato
Kwisiqendu samva nje, uRole uvulele umyeni wakhe malunga nolwalamano olusondeleyo nomakhulu wakhe amthandayo. Besinomdla wokuba ukubona icala leemvakalelo zomfazi wakhe kutshintshe imbono yakhe. Ayizange, uyavuma. Ndiyazi ukusukela ngosuku lokuqala, xa wayethetha ngokwasemoyeni emtshatweni, malunga nokuba ubaluleke kangakanani kwaye uyathandeka umakhulu wakhe kuye. Ndiyayixabisa into yokuba waziva ekhululekile kunye nam ukuvula ngaphezulu, kwaye ekugqibeleni ibali lakhe liyitshintshile indlela endijonga ngayo ubudlelwane bam. Kwakungumzuzu othakazelisayo, ococekileyo ukusuka kuSam ukuba andiyi kuze ndiwalibale.
Ukuthomalalisa imeko, sabuza uB Bowlus ukuba angathanda ukuba nesuphu yebhola yomfazi wakhe (awayemenzele yona ngoku Ukutshata ekuboneni kokuqala epioside) okanye isaladi yeTaco eyaziwayo ngoku. UTres noDavid bobabini [babonakalisile] ubuchule obucokisekileyo bokupheka, umntu osandul 'ukutshata utsho ngokuhleka, kwaye nangona bonke behlangabezana neemfuno zepiramidi yokutya, kufuneka ndiye nesuphu yebhola yam matzo. Ndandiwongekile ngokuba uSam endivumela ukuba ndingene kwinkolo yakhe yobuJuda, kwaye yayiyinto entle kuthi.
Kubonakala ngathi abo basandul 'ukutshata baye bonwaba kakhulu abalandeli abangazange baboniswe (kude kube ngoku!). Mna noSam saya kukhenketho lweziporho kunye, uB Bowlus usixelela, kwaye kwakonwabisa kakhulu. Ndingumntu othandabuzayo xa kuziwa kwi-ghouls, kodwa uSam unonxibelelwano olunomdla kunye neparanormal evuse abafileyo, ndiyathetha ishiya, waphakamisa ishiya lam, uyahleka. Sibe nexesha elimnandi, kwaye ndiyazi ukuba uyakundivuyela ngokumfaka kuqhushumbo.
Sibuze uB Bowlus ukuba waziwa na kulo mboniso, kwaye ukuba kukho nabaphi na abalandeli abakhe bambuza imibuzo engaqhelekanga. Ndiye ndabonwa amatyeli ambalwa, kwaye owona mbuzo uthandwayo kakhulu kukuba mna no Sam sihlala kunye, apho ndiphendula ngehlombe, kwaye 'kufuneka uhlale ujonge,' wabelana ne-Knot. Akukho mibuzo ingaqhelekanga malunga nalo mboniso, kodwa umntu omnye ubuzile ukuba ndingathanda ukulwa idada elinye elinobungakanani behashe okanye ikhulu lamahashe alinganayo. Ndixelele lo quack ukuba ayeke ukukhwela ihashe macala onke, kucacile ndiza kulwa idada elinye elingangehashe.
Konke ukuqhula ecaleni, sikhuthaze u-Bowlus ukuba afumanise ukuba kuthathe ixesha elingakanani abo batshatayo ukuthatha isigqibo sokuba bahlale kunye okanye bohlukane emva kovavanyo lweeveki ezintandathu. Nangona ababukeli bengazi nge Ukutshata ekuboneni kokuqala Isiphumo, abathathi-nxaxheba kulo mboniso benze eso sigqibo sibalulekileyo. Isigqibo asenziwa de kwaba lusuku lwesigqibo, uB Bowlus usixelele, kwaye yayiyingxoxo enzima kakhulu.
Ngeeveki nje ezimbalwa ezishiyekileyo de kube lixesha lokugqibela lonyaka, sikhathazekile ukufumanisa ukuba zeziphi izibini ezenze ukuba zisebenze, kwaye ngubani owazibiza ngokuba uyayeka. Ungaphoswa Ukutshata ekuqalekeni t, isasaza ngolwe-Lwesibini ngentsimbi ye-9. I-EST kwi-FYI.
ilokhwe yesibini yomtshato ecaleni kwam
yeyiphi isandla onxiba umsesane wokuzibandakanya kuyo
amaqebengwana omtshato amnyama namhlophe
utata oyingqayizivele wezimvo zesipho somtshakazi
banxiba ntoni abafazi kumnyhadala womtya omnyama
iikhabhathi ezimnyama namhlophe